WAR CUSUB: Paul Pogba oo soo gaaray Ingiriiska si uu u dhammeystiro heshiiska Man United – Gool FM
Bruno Fernandes oo ka hadlay dareenkiisa kaddib guushii dahabiga aheyd ay ka soo heleen Chelsea
Muxuu ka yiri tababare Solskjær guushii ay xalay ka gaareen kooxda Chelsea?
“Ninka goolka naga dhaliyay waxay aheyd in la ceyriyo” – Frank Lampard
Maxay ka dhignayd labadii gool ee xalay laga diiday Kooxda Chelsea kulankii ee Man United?
Horudhac: Atletico Madrid vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ay Reds difaacashadooda UCL ka bilaabayso Wanda Metropolitano)
Horudhac: Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ka dhacaya Signal Iduna Park)
Man United oo guul dahabi ah garoonka Stamford Bridge kaga soo gaartay kooxda Chelsea… +SAWIRRO
Yaa guulo badan kooxaha Chelsea iyo Man United kahor kulankooda caawa?
Shaxda rasmiga ah kulanka Chelsea iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Salah, Mane & Firmino oo hoggaaminaya liiska xiddigaha kooxda Liverpool ee ka qeyb galaya kulanka Atletico Madrid
WAR CUSUB: Paul Pogba oo soo gaaray Ingiriiska si uu u dhammeystiro heshiiska Man United
Byare August 6, 2016
(Italy) 06 Agoosto 2016. Paul Pogba ayaa soo gaaray Manchester si uu u dhammeystiro saxiixa Red Devils sida ay sheegayaan warar ka imaanaya Talyaaniga.
La Gazzetta dello Sport ayaa sheeganeysa in Pogba uu galabta u soo duulay Ingiriiska isla markaana uu berito tijaabada caafimaad u mari doono Manchester United.
Kooxda ku ciyaarta Old Trafford ayaa lagu wadaa inay jabiso rikoodhka suuqa kala iibsiga adduunka iyadoo 112-milyan dib ugula soo saxiixaneysa xiddiga qadka dhexe ee reer France.
Jose Mourinho ayaa shirkiisa jaraa’id shalay ku xaqiijiyay inuu ku sii dhawaanayo inuu gacanta ku soo dhigo saxiixiisii afaraad ee xagaagan kaa oo noqon doona xiddig qad dhexe oo aad u fiican, laakiin wuxuu diiday inuu xaqiijiyo in laacibkaasi yahay Pogba.
Horaantii maanta, tababaraha Juventus Massimiliano Allegri ayaa sheegay inuu ka filayo Pogba inuu dib ugu soo laabto tababarka kooxda maalinka isniinta ah.
Laakiin jariiradda Gazzetta dello Sport ayaa sheeganeysa in intii uu Allegri ku jiray shirka jaraa’id uu uga hadlayay arrimaha kooxda iyo Pogba uuba laacibka reer France diyaarad u sii saarnaa magaalada Manchester taa oo si qarsoodi ah loo soo qaban qaabiyay.
Waxay kaloo jariirada sheegtay in inta u dambeysa heshiiska la hagaajin doono berito iyadoona si rasmi ah loo shaacin doono maalmaha soo socda.
Heshiiskan ayaa ka dhigi doona Pogba inuu dib ugu soo laabto Old Trafford afar sano kaddib markii uu bilaash uga tagay kooxda kaddib markii uu diiday in heshiiska loo cusbooneysiiyo.
Jilaaga wayn ee Will Smith oo daboolka ka qaaday kooxda uu ka taageero Yurub!
DUULLAANKA SHIINAHA: Marka lagasoo tago AC Milan & Inter Milan arag kooxaha reer Yurub ee ay Shiinuhu saamiyada ka iibsadeen!